Mepee faili GML na QGIS na Microstation - Geofumadas
Fọm GML bụ otu n'ime usoro ndị GIS mmepe na ndị ọrụ nwere mmasị dị ukwuu, ebe ọ bụ na ọ bụghị ịbụ usoro OGC na-akwado ma bụrụ nke ọkọlọtọ, ọ na-arụ ọrụ nke ọma maka ịnyefe na mgbanwe nke data na ngwa weebụ.
GML bụ ngwa nke asụsụ XML maka ebumnuche geospatial, acronym ya na-anọchite Geography Markup Language. Site na nke a ọ ga-ekwe omume izipu faịlụ ederede, faịlụ vekto na ọbụlagodi iji GMLJP2. Ebumnuche ya dabere na nkọwa nke usoro ọnụ (ihe a na-anọchi anya ya) na data n'onwe ya, nke mere na usoro GIS mgbe ị na-agụ faịlụ GML na-ebu ụzọ kọwaa profaịlụ nke njirimara ma gosipụta data mpaghara. dị n'ebe ahụ.
Ihe atụ nke ọdịdị mbụ ahụ bụ otu ọrụ azụmahịa nke ụlọ, nke ihe onwunwe pụtara na ọnọdụ mbụ ya, yana otu abuo mgbe ọ gbaghaara, ya na onye nwe ya alphanumeric information.
Esi eji QGIS gụọ faịlụ GML.
Nke a dị mfe dị ka software nwere ike ime:
Layer> tinye oyi akwa> tinye akwa akwa akwa> nyocha
Lee nhọrọ GML ahọrọ, ọ bụkwa ya.
Iji chekwaa oyi akwa na QGIS dị ka faịlụ GLM, dịka pịa nri na nchekwa, chekwaa ma họrọ nhọrọ GML.
N'ebe a, ọ dị mkpa ịkọwa ụfọdụ nhazi, dịka ọmụmaatụ:
Ọ bụ usoro ntinye akwụkwọ, nke nwere ike ịbụ nke kọwapụtara oyi akwa ahụ.
Nkọwa nke ihe odide, Latin 1 bụ ezigbo iji ghara inwe nsogbu na mkpesa na akwụkwọ ozi n'asụsụ Spanish anyị.
Ọdịdị ahụ dị mkpa, na-eji GML 3 ga-adịkwu jụụ ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ka ọ bụrụ na mmemme ndị ọzọ gụọ ya ma ọ bụ ka ekwusara site na Geoserver.
Ọzọkwa, a ghaghị ịtọ ntọala ya ma ọ bụrụ na anyị chọrọ itinye atụmatụ ahụ n'otu faịlụ ahụ ma ọ bụ iche iche. Ọ bụrụ na ịgụ ya na Bentley Map, achọrọ ka nke a dị iche iche, dịka akọwara mgbe e mesịrị.
Otu esi gụọ faịlụ GML na Microstation V8i
Enwere ike ịrụ ọrụ a na ngwa Microstation GIS, dị ka Bentley Map, PowerView, Bentley Cadastre, ma ọ bụ yiri.
N'okwu m, ọ bụrụ na ejiri m Bentley Map, a na-eme ya:
Faịlụ> Bubata> GIS Data Types…
Dịka ị pụrụ ịhụ, ebe a, ị nwekwara ike ịkpọ olulu spatial arụ ọrụ dị ka WFS Service Wet Web, Space Spatial, SQL Server.
Ụdị ụdị SHP adịghị emetụta ya, ebe ọ bụ na ha mepere ụdị ọdịdị ala.
N'ihe gbasara faịlụ GML, agbakwunye GML File nhọrọ ahọrọ ...
Na obubọk na-egosi, ọ ga-adị mkpa ịhọrọ ma ọ bụrụ na faịlụ esemokwu dị iche. A maara faịlụ Bentley schema dị ka XSD.
Ozugbo a mechara nke a, pịa bọtịnụ Import1 ozugbo, wee họrọ Preview naanị iji gosipụta ya ma ọ bụ Bubata iji weta ya na map.
Mgbe ị na-elele ihe ahụ na bọtịnụ "Nyochaa," dị ka otu iko, ma na-emetụ ihe ahụ, a na-ebudata data tabula dị ka tebụl dị ka koodu xml, dịka e gosiri na foto na-esonụ.
Iji bubata na GML, otu usoro a agbasoro:
Faịlụ> Mbupụ> GIS Data Type…
N'akụkụ abụọ ahụ, ya na QGIS na Bentley Map, ọ ga-ekwe omume ịmepụta GML dịka ihe ọ bụla vector faịlụ, yana data alphanumeric ya.
Previous Post«Previous GIM International Español, na-aga n'ihu na-aga nke ọma
Next Post CHIP The $ 9 MicrocomputerNext »
2 Azịza ya "Mepee faịlụ GML na QGIS na Microstation"
Francisco J Corral Nieto kwuru, sị:
Ana m akwado ngwa weebụ nke IGP Iberpix4, kachasị mma imeghe, gbanwee, chekwaa (gml, shp, kmz).
Transparencies, prints, wdg.
Ihe omume a dị nnọọ mfe iji anya nke uche, na n'efu: